Otis Boykin (1920-1982), onye mepụtara pacemaker - Afrikhepri Fondation
sunday, Jenụwarị 17, 2021
Welcome NDỊ BỤRỤ NTỤRỤ NA NDỊ ỌZỌ
Otis Boykin (1920-1982), Onye nyocha nke onye na-emepụta pacemaker
Na-agụ: 2 min
INgwakọta ndị a ma ama: nguzogide eletriki, nkwụsi ike na-agbanwe agbanwe, njikwa njikwa maka pacemakers, imebi ego na ndekọ ikuku kemịkal. Onye mepụtara ihe karịrị ngwaọrụ 25, onyinye kasịnụ nke Boykin na ngalaba nke teknụzụ ga-abụ ngalaba njikwa maka pacemaker artificial, nke jiri paịliki eletrik na-enwe obi uto mgbe niile. Mmezu ndị ọzọ dị mkpa ga-agụnye okike nke ihe na-agbanwe agbanwe (nke eji ihe agha na-eduzi) yana nrụgide eletriki ka mma ejiri kọmputa, redio na telivishọn.
A mụrụ August 29 1920 na Dallas, Texas, Boykin bụ nwa nke ọkwá nkà na nne na-anọ n'ụlọ. Ọ na-ahapụ Ụlọ Ọrụ Nkà na Ụzụ nke Illinois tupu ya amaliter graduation ma nyefee ya ọrụ dị ka onye na-emepụta ihe.
Ọ natara ikike izizi ya na 1 maka onye na-ere waya nke na-enye ohere ị nweta ọkụ eletrik zuru oke iji tinye igwe. Afọ abụọ ka nke ahụ gasịrị, ọ mepụtara ihe okike ya nke enwere ike imepụta na ọnụ ala, na -eche ujo na mgbanwe oke mgbanwe. Boykin si otú a bụrụ onye ama ama n’ụwa elektrọnik. Ndị agha US na IBM na-enye iwu na-eguzogide ya, nke a ga-eji maka ngwa eletriki eletrik nkịtị na ụta agha.
Ihe kachasị ama ama ya bụ ngosipụta nke nguzo a na-eji mee ka onye na-emepụta ihe. Usoro ihe a, nke na-ezigara obi ọkụ na-achịkwa obi ya ma na-achịkwa oge ya, na-anọgide na-adị ndụ ọtụtụ narị puku mmadụ gburugburu ụwa.
Otis Boykin emeela ngụkọta nke 11 na ihe 28 dị iche iche.
Gee nti nyocha nile nke Thinkerview (Videos)
N’oge na-adịghị anya, ọgwụ nke nwere ike ịgwọ ọrịa niile (flu, ebola, HIV)
Okwu nke King Gbehanzin na 20 January 1894
Bertin Nahum, onye mepụtara ụzụ robot ezubere inyere ndị ọrịa akwara ozi aka
Esi kwadebe Soupou Kandja?
Mepụta akaụntụ ọhụrụ
Dejupụta ụdị dị n'okpuru ka ịdebanye aha gị